Displaying 31-40 of 447 results.
लीलानाथ श्रेष्ठ निर्विकल्प र वेजोड उम्मेदवार
सिरहा : उनी कहाँ गए पछि सेवा र सहयोग अवश्य पाईन्छ । उनले कसैलाई पनि दुत्कारदैनन् । सानो होस वा ठुलो सवैको कुरा ध्यान दिएर सुन्छन् । कसैसंग एक पैसा पनि घुस खाँदैनन् । जनताको काम गर्न गराउन उनी हर हमेसा तत्पर रहन्छन् । सिरहा जिल्लामा उनी जत्तिको जनसेवी र पहँुच भएको अरु न.. .. ..
सिरहा : निकट अतितमा संपन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा एमालेको सशक्त उपस्थिति रहेको मानिने सिरहाको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ वाम गठवन्धन भए पश्चात ‘वाम शक्ति केन्द्रको’ रुपमा चर्.. .. ..
नयाँ शक्तिका संयोजक डा. भट्टराईलाई यसरी पक्राउ गरियो (हेर्नुस् ७ तस्विर)
काठमाडौं, २० चैत । निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा धर्ना दिन पुगेका नयाँ शक्तिका नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । नयाँ राजनीतिक दललाई दलीय चुनाव चिह्नबाट वञ्चित गरिएको भन्दै नयाँ शक्तिका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा .. .. ..
- सञ्जितकुमार मण्डल
गौशाला, २० चैत । महोत्तरीलगायत सम्पूर्ण मिथिलाञ्चलमा आज चैत्र शुक्ल षष्ठीका साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै चैती छठ उत्सव मनाइदैछ । चार दिनसम्म विभिन्न विधि गर्दै मनाइने यस पर्वको तेस्रो दिन आज साँझ तराईको .. .. ..
निर्वाचन आरोग घेर्न गएका नयाँ शक्तिका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई पक्राउ
काठमाडौं, २० चैत । निर्वाचन आयोग घेराउन गर्न पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई पक्राउ परेका छन् । आयोगको कान्तिपथस्थित कार्यालय घेराउ गरेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका नेता तथा पू.. .. ..
बाबु विदेशी र आमासँग वंशज नागरिकता भए सन्तान अंगीकृत नागरिकता पाउने
काठमाडौं, १६ चैत । सर्वोच्च अदालतले बाबु विदेशी भए पनि वंशजका आधारमा आमाले नेपाली नागरिकता लिएको भए उनीहरूबाट जन्मेका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिन सकिने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिलाब.. .. ..
मधेस राजनीतिः ओलीलाई झापड, बाबुरामलाई साथ !
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्ना पार्टीको माहोल बनाउन भन्दै नेकपा एमालेले विशेष गरी तराईमा केन्द्रित गरेर कार्यक्रम बनायो । तराई–मधेसलाई केन्द्रित गर्दै एमालेले मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरेर काकडभिट्टाबाट अभियानको थालनी गर्यो । अभियान.. .. ..
मोर्चाभित्रका तीन दल एकताको अन्तिम तयारीमा
काठमाडौं, १४ चैत । सीमांकनलाई बटमलाइन बनाएर आन्दोलनमा उत्रेका मधेसी मोर्चाका केही घटक स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी पार्टी एकीकरणको तयारीमा जुटेका छन् । मोर्चामा आवद्ध तीन दल एकीकरणको अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
आन्दोलनमा रहेका शरदसिंह भण्डारी
एसइई परीक्षा दिएका एक विद्यार्थीको लहानमा हत्या
सिरहा, १४ चैत । सिरहाको लहान नपा ३ स्थित राजमार्ग छेउमै एक विद्यार्थीलाई हत्या गरेर झुण्ड्याएको अवस्थामा शव फेला परेको छ ।
सप्तरी मल्हनवा १ का अन्दाजी १७ बर्षिय श्रवण कुमार साहको शव आज विहान फेला परेको हो । पूर्वपश्चि
राजविराजको गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रभित्र दिउँसो १ बजेप